၂၀၁၆ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလအတွင်း ကယားပြည်နယ်ရှိ ဘိန်းခင်းတခုအတွင်း ဘိန်းခြစ်နေသော တောင်သူတဦး / Reuters
By Andrew R.C. Marshall7December 2017
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှု အကြီးအကျယ် ကျဆင်းသွားသော်လည်း အာရှနိုင်ငံများ အပြင်းအထန် တိုက်ဖျက်နေရသည့် မက်သာဖက်တမင်းကဲ့သို့သော တရားမဝင် ဓာတုဆေးဝါး ဝယ်လိုအား ဒေသအတွင်း လွန်စွာမြင့်မားလာသည်ဟု ကုလသမဂ္ဂ အဆင့်မြင့်အရာရှိတဦးက ဒီဇင်ဘာလ ၆ ရက်နေ့တွင် ပြောသည်။
ဘိန်း စိုက်ပျိုးသော ဧရိယာမှာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း လေးပုံတပုံ ကျဆင်းသွားသည်ဟု ကုလသမဂ္ဂ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာရုံး – UNODC က ဒီဇင်ဘာလ ၆ ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်သော အစီခံစာတစောင်က ဆိုသည်။
“ဘိန်း ထုတ်လုပ်မှုကျဆင်းသွားတာကို ကြိုဆိုပေမယ့် အောင်ပွဲတခုတော့ မဟုတ်ဘူး” ဟု UNODC၏ အရှေ့တောင်အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာ အကြီးအကဲ ဂျရမီ ဒေါက်ဂလပ်စ် Reuters သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
“ဒေသတွင်း မူးယစ်ဆေးဝါဈေးကွက်ဟာ ဓာတုမူးယစ်ဆေးဘက်ကို တော်တော်လေးပြောင်းသွားပြီး ဘိန်း စီးပွားရေးကို ဟန့်တားလိုက်တယ် ဆိုတာကို ဒီအချက်က အတည်ပြုလိုက်ပုံရတယ်” ဟုလည်း သူပြောသည်။
တရုတ်နှင့် အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံများတွင် စပိဒ်၊ ရှာဘူး နှင့် ယာဘ ဟုလည်းခေါ်ကြသော လွန်စွာ စွဲလွယ်သည့် မက်သာဖက်တမင်း ဝယ်လိုအား လွန်စွာမြင့်မားနေပြီး ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသည် ထိုပြဿနာကို ဖြေရှင်းရန် သွေးထွက်သံယို များလှသော မူးယစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ရေးစစ်ပွဲ ဆင်နွှဲနေသည်။
တချိန်တည်းမှာပင် လူငယ် မူးယစ်ဆေး သုံးစွဲသူ အများအပြားသည် မက်သာဖက်တမင်းကိုသာ ပိုမိုနှစ်သက်သောကြောင့် ဘိန်းမှ ထုတ်လုပ်သော ဟီးရိုးအင်းအတွက် ဒေသတွင်း ဝယ်လိုအားမှာ တည်ငြိမ်နေသည် သို့မဟုတ် ကျဆင်းသွားသည်ဟု UNODC၏ စာရင်းများအရ သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ရှမ်းပြည်နယ်နှင့် ကချင် ပြည်နယ်တို့တွင် ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း ဘိန်း ၄၁၀၀၀ ဟက်တာ စိုက်ပျိုးထားသည်ဟု UNODC က ခန့်မှန်းထားပြီး နောက်ဆုံး စာရင်းကောက်ယူသည့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်က ဘိန်းစိုက်ဧရိယာ ၅၄၀၀၀ ရှိသောကြောင့် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း ကျဆင်းသွားသည်။
လွန်ခဲ့သော ဆယ်စုနှစ်အတွင်း ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှု နှစ်စဉ်တိုးတက်လာခဲ့ပြီး မြင့်မားသော အဆင့်တွင်သာ ရပ်နေခဲ့သည်ဟု UNODC ၏ စာရင်းများက ဆိုသည်။
ကမ္ဘာ့ ဘိန်းအများဆုံးထုတ်လုပ်သည့် အာဖဂန်နစ္စတန်တွင်မူ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း ဘိန်းစိုက်ဧရိယာစံချိန်တင်တိုးလာပြီး ၃၂၈၀၀၀ ဟက်တာရှိသည်ဟု UNODC က လွန်ခဲ့သော လက ကြေညာသည်။
အစိုးရသည် တိုးတက်မှုကို တွေ့ရသောကြောင့် ကျေနပ်မိကြောင်းနှင့် ဘိန်းစိုက်ပျိုးသော အသိုင်းအဝန်းများအတွက် အစားထိုး အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းများ ဖန်တီးပေးသည့် အစီအစဉ်များကို အားပေးကြောင်း မြန်မာပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ကျော်ဆွေပြောသည်ဟု UNODC ထုတ်ပြန်သည့် ကြေညာချက်တွင် ဖေါ်ပြထားသည်။
သို့သော် မြန်မာနိုင်ငံသည် အရှေ့တောင်အာရှမှ မက်သာဖက်တမင်း အများစု၏ ပင်ရင်းနိုင်ငံဖြစ်ပြီး ထိုမူးယစ်ဆေးကို အစိုးရက ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်း မရှိသည့် ဥပဒေကင်းမဲ့နေသော နယ်ခြားဒေသများတွင် အများအားဖြင့် ထုတ်လုပ်နေကြသည်။
အာရှမှ ရာဇဝတ်ဂိုဏ်းများသည် ဟီးရိုးအင်းထက် များစွာ အာနိသင်မြင့်မားပြီး အကျိုးအမြတ်လည်း အဆများစွာ ပိုမိုရရှိသည့် ဖန်တနိုင်းလ် (fentanyl) ခေါ် မူးယစ်ဆေး ထုတ်လုပ်ရန် ပြင်ဆင်နေသည် သို့မဟုတ် ကြံစည်နေသည်ဟု ယူဆနိုင်သော အကြောင်းရှိသည်ဟုလည်း ဒေါက်ဂလပ်က ပြောသည်။
ဈေးပေါပြီး အသက်သေဆုံးစေနိုင်သော ဖန်တနိုင်းလ် မူးယစ်ဆေးများ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် လွန်စွာ များပြားနေခြင်းသည် မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းနှင့် သေဆုံးခြင်းဆိုင်ရာ အများပြည်သူ ကျန်းမာရေး အရေးပေါ်အခြေအနေကို ဖြစ်စေသည်ဟု လွန်ခဲ့သောအောက်တိုလာလက သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်က ပြောသည်။
“လူတွေက ဘယ်လုပ်ငန်းက ဖြစ်ဖြစ် အကျိုးအမြတ် လိုချင်ကြတယ်။ ဖန်တနိုင်းလ်က အကောင်းဆုံး အကျိုးအမြတ်ရအောင် လုပ်ပေးနိုင်တယ်။ ဘိန်းစိုက်တဲ့သူတွေကိုတောင် လုံး၀ ရှင်းပစ်လိုက်နိုင်တယ်” ဟုလည်း ဒေါက်ဂလပ်စ်က ဆိုသည်။
ဘိန်းစိုက်ခြင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံမှ သိန်းနှင့်ချီသောသူများ၊ အထူးသဖြင့် ဝေးကွာသော တောင်တန်းဒေသ ရှမ်းနှင့် ကချင်ပြည်နယ်မှ လူများကို အလုပ်အကိုင်နှင့် ဝင်ငွေကို ပေးသည်။
ထိုပြည်နယ်များရှိ ပဋိပက္ခဒေသများတွင် ဘိန်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများအတွက် ခိုလှုံရန်နေရာဖြစ်နေသောကြောင့် ဘိန်းစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ခြင်းသည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်အထိ အဆင့်ဆင့် တိုးတက်နေသည်ဟု ဒေါက်ဂလပ်စ် ကပြောသည်။
အစိုးရတပ်များသည် လူမျိုးစုလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်း အများအပြားနှင့် တိုက်ခိုက်နေသည်မှာ ဆယ်စုနှစ်များစွာ ကြာပြီဖြစ်ပြီး နှစ်ဘက်စလုံးသည် မူးယစ်ဆေးနှင့်မကင်းဟု စွပ်စွဲခံရသည်။
UNODC ၏ စစ်တမ်းအရ အစိုးရသည် ၎င်း၏ ဘိန်းတိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းများကို နောက်ပြန်ဆုတ်ထားသော်လည်း ဘိန်းစိုက်ပျိုးခြင်းသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ကျဆင်းသွားသည်ဟု သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ဘိန်း ၃၅၃၃ ဟက်တာသာ ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ်ကမူ ၁၃၄၅၀ ဟက်တာအထိ ဖျက်ဆီးခဲ့သဖြင့် ဘိန်းခင်းဖျက်ဆီးမှု ကျဆင်းသည်။
တရုတ်နိုင်ငံသည် မြန်မာနိုင်ငံထွက် ဘိန်းမှ ထုတ်လုပ်သည့် ဟီရိုးအင်းများအတွက် အကြီးမားဆုံးဈေးကွက်ဖြစ်သည်။ သို့သော် တရုတ်နိုင်ငံတွင်လည်း ဈေးကွက် အကြီးအကျယ် ပြောင်းလဲနေပြီး ဟီးရိုးရင်း ဝယ်လိုအား ကျဆင်းကာ မက်သာဖက်တမင်း ဝယ်လိုအား တက်နေသည်။
“ဒေသတွင်း မူးယစ်ဆေးဝါးဈေးကွက်က ပြောင်းလဲနေပြီ၊ အစိုးရတွေအနေနဲ့ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရာမှာ နည်းလမ်းပြောင်းဖို့လိုနေပြီ” ဟုလည်း ဒေါက်ဂလပ်စ် ကပြောသည်။
အစိုးရများအနေဖြင့် ဓာတုဆေးဝါးနှင့် ၎င်းတို့ကို ထုတ်လုပ်ရာတွင် သုံးသည့် ဆက်စပ်ဓာတုပစ္စည်းများကို ပိုမိုအာရုံစိုက်ရန် လိုကြောင်းနှင့် မူးယစ်ဆေး တားဆီးရေး လှုပ်ရှားမှုများ၊ ရပ်ရွာအခြေစိုက် ဆန္ဒအလျှောက်ပြန်လည်ထူသောင်ရေး အစီအစဉ်များမှတဆင့် မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲခြင်းကို ဖြေရှင်းရန် သူက တိုက်တွန်းသည်။
( Reuters သတင်းထောက် Andrew R.C. Marshall ၏ Myanmar’s opium crop plummets, but no victory over Asia’s narco-boom – UN ကို ဘာသာပြန်ဆိုသည်။)
Topics: ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှု, မူးယစ်ဆေးဝါး
Andrew R.C. Marshall Contributor